मलेसियामा भा’गेर काम गरेका बिष्टको मृ’त्यु पछी श’ब ल्याउन कठिनाइ !! उतै अत्ये’ष्ठि गरियो !! हार्दिक श्रन्दांजलि - Public 24Khabar
Home News मलेसियामा भा’गेर काम गरेका बिष्टको मृ’त्यु पछी श’ब ल्याउन कठिनाइ !! उतै...
ज्यान गुमाएका एक नेपालीको विहिवार मलेसियामा अत्येष्ठि गरिएको छ । खोटाङ जिल्ला खोटेहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५, चिप्रुङका रन बहादुर बिष्टको मलेसियाको चेरासमा हिन्दु परम्परा अनुसार अन्त्ये’ष्ठि गरिएको हो ।
होटल संचालक रोहित तामाङले राष्टडेली संग भने म कहाँ आउदा उहाँ विरामि जस्तै हुनुहुन्थ्यो धेरै ठाउँमा उपचार पनि गराए उहाँमा सुगर र प्रेसर रहेछ तर निको हुनु भएन, अचानक वसेको ठाउँमा ढल्नुभयो अस्पताल लगियो तर पनि बचाउन सकिएन ।
Previous articleआमाको अस्पतालको बिल तिर्न ओलम्पिकको स्वर्ण पदक
Next articleसाउदी दु’र्घटनामा मरेका भनेर काजकिरिया र मृ’त्यु दर्ता समेत गरिएका सुभास ज्युदै घर आए !! मृ’त्यु दर्ता खारेज गर्न चार बर्स लाग्यो